Myanmar IT Resource Forum » Garbage » တာဝန်များခွဲပေးခြင်း
1 တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 6:15 pm
အရင်က Attacker ရဲ့ ၁.၁.၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ ပိုစ့်တော့ ရှိပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကလည်း ကျနော့်အစီအစဉ်က ပြိုင်ပွဲကို ဦးတည်မယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်လို့ Topic ခွဲထုတ်လိုက်တာပါ။ ပြိုင်ပွဲအတွက်လုပ်ပြီးလို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Attacker ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့။
ကျနော်ပြောနေတာတွေက ဆုရဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေနော်။
၁- Category ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါမည်။ (ကျနော်တစ်ယောက်ထဲလုပ်ပါမယ်။) တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းပါမယ်။ ကျနော့် Own Idea လေးတွေလည်းပါမယ်။ အသစ်စဉ်းစားမိတာလေးတွေရှိလို့။
၂- FAQ ရေးပေးကြပါ။ (Moderator များ ၊ J-Mod များမှရေးပေးပါရန်။)
ကျနော်ဖြစ်စေချင်တာက FAQ မှာ ဘာတွေပါသင့်သလဲဆိုတာကို အရင်တိုင်ပင်ပါ။ (Thread တစ်ခုဖွင့်သင့်က ဖွင့်ပါ။ ရှိတော့ ရှိပြီးသားထင်တယ်။)
ပြီးရင် ဘယ်အပိုင်းကို ဘယ်သူက ရေးမလဲဆိုတာ တိုင်ပင်ပါ။ Register မှ အစ Forum မှာ ပါတဲ့ Feature လေးတွေ အဆုံး ရေးပေးကြပါ။ (ပိုစ့်တင်တဲ့ အခါ Text Editor မှာ ရှိနေတဲ့ button လေးတွေကိုက အစ သေချာ အသေးစိတ်ရေးပေးဖို့ စီစဉ်ကြပါ)
ပြီးရင်တော့ ပုံလေးတွေ ၊ စာလေးတွေကို သေချာစီစဉ်ပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပိုစ့်တစ်ခုအဖြစ် ရေးပေးပါ။ Help & Feedback ထဲတွင်ထည့်ထားပါ။ FAQ Page ကို ပြီးမှ ကျနော်ပြန်ပြင်ရေးပေးမှာပါ။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ ခေါင်းစဉ်ခွဲတာကို ၂ ရက်နဲ့ ပြီးအောင်ခွဲပေးပါ။ ပြီးရင် ၃ ရက်နဲ့ အပြီးရေးပေးပါ။
Request လုပ်တာပါနော်။ ဖိုရမ်အတွက် ဒီတစ်ခါ အားကုန်အရှိန်ယူလိုက်ရင် နောက်ဆို အေးဆေးပါပြီ။ (တောင်ကုန်းပေါ်တက်သလိုပေ့ါ ၊ တက်နေတုန်း ပင်ပန်းပေမယ့် ၊ တောင်ထိပ်ရောက်ပြီးလို့ ဆင်းတဲ့အခါ သက်သာမှာပါ။ မြင့်မြင့်တက်လေ ၊ များများ သက်သာလေပါ)
FAQ ရေးဖို့ကို အစအဆုံး Moderator တွေလက်ထဲထည့်ထားတာနော်။ အရင်လို ကျနော်တို့ကချည်း ဦးဆောင်နေတာမျိုးမလုပ်ချင်တော့လို့ပါ။ အစ်ကိုတို့ဆို ကျနော့်ထက် အသက်ကြီးကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ကိုယ်ပိုင်ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီဖိုရမ်ကလည်း အစ်ကိုတို့ပိုင်တာဘဲလေ။ အစ်ကိုတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လည်း ဖိုရမ်က ရပ်တည်နိုင်ရမှာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် အခုကိစ္စကိုတော့ အစ်ကိုတို့ ဦးဆောင်လုပ်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
Thread တစ်ခုဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်က စလုပ်လိုက်ကြပေ့ါ။
၃- ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် စာတန်းကို Attacker မှ အမြန်ဆုံးပြန်လည် စာစီရေးပြီး ဖိုရမ်ကို တင်ပေးပါ။
FAQ ကိစ္စ ၊ Table ပြန်ခွဲတဲ့ကိစ္စတွေ မင်းမပါနဲ့ဦး။ မင်းအတွက် လုပ်စရာရှိတာကို အရင်လုပ်လိုက်ဦး။ အဓိကက စာကို အရောက်တင်နိုင်ဖို့။
စာတင်ပြီးတဲ့နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ စနေနေ့မှာ ငါက Table အပြီးခွဲပေးမယ်။ FAQ လည်း အဲဒီ့အချိန်လောက်ဆို ပြီးနေလောက်ပါပြီ။
Table ခွဲပြီးတာနဲ့ ၊ နောက်တစ်နေ့မှာ FAQ ကို တစ်ရက်ထဲနဲ့ အပြီးလုပ်ပေးမယ်။
အဲဒီ့အခါမှ သူတို့မပြီးသေးလည်း ငါတို့ ၀ိုင်းကူလို့ရတယ်လေ။ OK?
alt ကတော့ FAQ လုပ်ဖို့အထဲဝင်ရင်ဝင်လိုက်လေ။
2 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 6:32 pm
FAQ ထဲလည်းငါမ၀င်နိုင်ဘူး...စာကူးပွဲလည်းရှိတယ်...Link တွေတတ်နိုင်သမျှပြောင်းပေးနေတယ်...ifile ကတော့ခြွင်းချက်...နောက်ပြီး Mediafire တစ်ချို့လည်းငါမချိန်းပေးနိုင်ဘူး...Multiupload နဲ့ အဆင်မပြေဘူး..ပြန် Down တင်မှရမှာ...အဲ့ဒါတွေကိုတော့ခဏချန်ထားခဲ့တယ်...
3 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:04 pm
ရော် ၊ စာမေးပွဲက ငါလည်း ပါနေတာဘဲကိုး။
ဒါဆိုလည်းပြီးတာဘဲ။ လင်ခ့်အားလုံးပြောင်းဖို့ နင်တာဝန်ယူ။
4 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:35 pm
ဘာလဲဟ။ အဲဒီ့အပိုင်း ငါမကိုင်သေးဘူးနော်။
သူ့ဟာသူပျောက်တာ ၊ ငါနဲ့ မဆိုင်သေးဘူး။
5 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:38 pm
အေး Programmer Zone ကြီး ပျက်သွားတာလား။
6 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:39 pm
ငါ့မှာ Banner ပြီးရင် Table ဆိုပြီးတော့ တဆင့်ချင်းလုပ်နေတာ။
အခုထိ Banner ကို စိတ်တိုင်းလည်း မကျသေးဘူး
7 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:40 pm
Banner ပိုင်းကို ငါရယ်ကို z3r00c00l ရယ်ဆွဲပေးမယ်..ကျန်တဲ့သူတွေ Vote ပဲလုပ်ပေးပေါ့...မင်းရဲ့ table ပိုင်းပဲအာရုံစိုက်
8 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:43 pm
Mon 11 Jan 2010 - 19:18 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Mon 11 Jan 2010 - 14:27 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Group modified Member အသဲကွဲလူသား has been deleted in group Junior Moderator
Mon 11 Jan 2010 - 14:19 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Group modified Member အသဲကွဲလူသား has been added in group Junior Moderator
Mon 11 Jan 2010 - 12:31 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Mon 11 Jan 2010 - 11:36 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 22:29 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 22:28 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 22:25 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 22:23 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 22:11 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 22:07 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 20:48 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 20:27 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 17:07 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated The rights for forum Windows have been updated
Sun 10 Jan 2010 - 16:50 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 16:46 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 15:43 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum Deleted Forum has been deleted
Sun 10 Jan 2010 - 15:36 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 15:10 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sun 10 Jan 2010 - 15:09 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated The rights for forum have been updated
Sun 10 Jan 2010 - 14:58 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sun 10 Jan 2010 - 12:23 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sat9Jan 2010 - 21:55 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 21:54 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum Deleted Forum has been deleted
Sat9Jan 2010 - 21:54 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 21:53 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 21:52 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 21:46 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated The rights for forum have been updated
Sat9Jan 2010 - 21:21 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Administration member logged in
Sat9Jan 2010 - 20:14 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 19:57 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 19:55 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 19:26 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum Gmail & Gtalk Tricks
Sat9Jan 2010 - 19:02 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:57 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:51 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:48 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:39 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:34 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] General configuration updated Data updated
Sat9Jan 2010 - 18:25 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] General configuration updated Data updated
Sat9Jan 2010 - 18:23 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] General configuration updated Data updated
Sat9Jan 2010 - 18:21 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] General configuration updated Data updated
Sat9Jan 2010 - 18:21 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:20 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
Sat9Jan 2010 - 18:14 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] General configuration updated Data updated
Sat9Jan 2010 - 18:11 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] Forum updated Options have been updated for forum
9 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 11th January 2010, 7:49 pm
ငါကြိုပြောထားမယ်။ စနေနေ့မှ Category ကို ထိမယ်။
ဒီကြားထဲမှာ အစီအစဉ်ကိုတော့ မင်းကို ပြောပြပေးမယ်လေ။
ငါအခု စဉ်းစားထားတာက Category ပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ ခေါင်းစဉ်တွေကို သိပ်မပြောင်းဘူး။
အပြင်အဆင် အထားအသိုကို One Click ဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ဖွဲ့စည်းမယ်။
စဉ်းစားထားတာတော့ အလန်းနော် အလန်း။
သူ့ရဲ့ Feature နည်းနည်းပါမယ်။
တခြား အကြောင်းအရာတွေကို အမြန်ဆုံးအချောသတ်။
ပြင်တာက ထပ်ပြီးမှ ပြင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။
10 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 12th January 2010, 3:51 pm
ဘယ် Mod မှလည်း FAQ ကိစ္စကို မစကြဘူးနော်။
ကျနော့်ကို မျှော်လင့်ချက် ပျက်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။
@attacker ဟိုဘက်ပိုစ့်မှာ ငါ Reply ပြန်ထားတယ်။
11 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 12th January 2010, 7:29 pm
ဘယ် Mod မှလည်း FAQ ကိစ္စကို မစကြဘူးနော
ဘာလုပ်ရမှာလဲ FAQ ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာနားမလည်ဘူး ပြောပါဟီး တုံးလို့
12 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 12th January 2010, 7:34 pm
ဖိုရမ် အသုံးပြုပုံ သဘောမျိုးပေ့ါ။
ဘာက ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်။ ဆိုတာမျိုးပါ။
13 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း on 27th January 2010, 10:42 pm
တစ်ယောက်ယောက် အရင်စပေးလိုက်မှရမယ်ထင်တယ်... စတာကို စောင့် နေကြတာဖြစ်မယ်။ ထင်တာပြောတာ။
ပြန်လာမှပဲ ပို့ နဲ့dl တွေတင်ပေးတော့မယ်။ အခုတော့ခဏတဖြတ်ပံဝင်နိုင်သေးတယ်။
14 Re: တာဝန်များခွဲပေးခြင်း